Tuubada biyaha ee cajiibka ah ee xeebta Valencia | Saadaasha Shabakadda
Sawir - Istaandarka wargeysyada
La duufaan ka tagtay magaalada Valencia oo leh 152 liitar halkii mitir oo laba jibbaaran jidadkeeda, ayaa lala yaabay: gacmo-biyood qurux badan ayaa laga sameeyay xeebta Valencian, gaar ahaan gobollada Sueca, El Perelló iyo Cullera.
Sida laga soo xigtay Wakaaladda Saadaasha Hawada ee Gobolka (AEMET), waafiiqan oo ka badan dul saar lagu qabtay xeebta»Ee Beesha Valencian. Runtii waa wax cajiiba.
1 Waa maxay tuubbooyinka biyaha?
2 Gacanta biyaha ee Valencia
Waa maxay tuubbooyinka biyaha?
Gacmo biyo ah, oo sidoo kale loo yaqaan 'Waterpouts', wax kale ma aha duufaanno ka sameysmay badda. Waxay badanaa ku xirmaan daruur cumuliform ah, oo si isdaba joog ah loo arko marka jawigu deggan yahay. Badanaa dhulka ma taabtaan, laakiin Waa inaad aad uga taxaddartaa, Maaddaama ay ku samaysan yihiin duufaan koronto oo aad u daran isla markaana soo saarta dabaylo gaadhaya 512km / saacaddii.
Duufaanadan waa kuwa ku badan badweynta Mediterranean, in kasta oo qof kasta uusan fursad u helin inuu arko markii uu jeclaan lahaa. Laakiin waa mahadsanid inaan marwalba haysanno sawirada iyo fiidiyowyada kuwa nasiibka leh. Runtuna waa taas kii shalay laga sameeyay xeebta Valencian waa mid cajiib ah.
Gacanta biyaha ee Valencia
Sida aad ku arki karto fiidiyowga, jilaagayagu wuxuu umuuqdaa mid fiiqan. Sida ay muujisay AEMET, waxay u egtahay in duufaantii soo gaadhay Valencia ay durba hawo qaloocsatay, sidaa darteed cusbooneysiinta ayaa sii xoojisay, sidaasna ku keenaysa mid ka mid ah muraayadaha dabiiciga ah ee ugu quruxda badnaa shalay.
Intaas waxaa sii dheer, waxay tilmaameen in danabyo badan oo hillaac ah laga diiwaangelinayo badda, gaar ahaan inta u dhexeysa Mareny de Barraquetes iyo El Perellonet, sidaa darteed muuqaalka thrombi ka badan lama diidin, tan iyo markii ay ku sugan yihiin gobollada gobollada Valencia iyo Castellón waxaa jira shuruudo ku habboon dhacdooyinkan saadaasha hawadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Tuubada biyaha ee cajiibka ah ee xeebta Valencia